KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guambiano Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Yosef kyerɛɛ nneduafo dae ase (1-19)
“Onyankopɔn na ɔkyerɛ dae ase” (8)
Farao tow pon n’awoda (20-23)
40 Nsɛm yi akyi no, Egypt hene nsahyɛfo panyin+ ne ne paanootofo panyin yɛɛ bɔne tiaa wɔn wura, Egypt hene no. 2 Enti Farao bo fuw ne mpanyimfo baanu no, nsahyɛfo panyin ne paanootofo panyin no.+ 3 Ɛnna ɔde wɔn koguu afiase wɔ awɛmfo so panyin no fi,+ baabi a Yosef da no.+ 4 Awɛmfo so panyin no de wɔn maa Yosef sɛ ɔnsom wɔn,+ na wɔkyɛe kakra* wɔ afiase hɔ. 5 Da koro anadwo, Egypt hene nsahyɛfo ne paanootofo a wɔda afiase hɔ no mu biara soo dae; ɛsono obiara dae no nkyerɛase. 6 Ade kyee anɔpa a Yosef baa wɔn nkyɛn no, ohui sɛ wɔn anim ayɛ mmɔbɔmmɔbɔ. 7 Ɛnna obisaa Farao mpanyimfo a ɔne wɔn da afiase wɔ ne wura fi no sɛ: “Adɛn nti na nnɛ mo anim ayɛ bosaa saa?” 8 Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛn mu biara aso dae, nanso obiara nni ha a ɔbɛkyerɛ ase ama yɛn.” Ɛnna Yosef bisaa wɔn sɛ: “Ɛnyɛ Onyankopɔn na ɔkyerɛ dae ase?+ Mesrɛ mo, monka nkyerɛ me.” 9 Enti nsahyɛfo panyin no kaa ne dae no kyerɛɛ Yosef sɛ: “Mesoo dae no, na bobe dua si m’anim. 10 Na bobe no yiyii nkorabata abiɛsa na ɛfefɛwee. Afei eguu nhwiren na ɛsow aba asiaw asiaw, na aba no beree. 11 Ná mikura Farao kuruwa, na mefaa bobe aba no bi kyĩ guu kuruwa no mu. Na mede kuruwa no hyɛɛ Farao nsam.” 12 Ɛnna Yosef ka kyerɛɛ no sɛ: “Ne nkyerɛase ni: Nkorabata abiɛsa no yɛ nnansa. 13 Aka nnansa na Farao ayi wo de wo dibea asan ama wo.+ Wode Farao kuruwa bɛhyɛ ne nsam sɛnea na woyɛ bere a wohyɛ no nsã no.+ 14 Na sɛ biribiara kɔ yiye ma wo a, kae me. Mesrɛ wo, da ɔdɔ a enni huammɔ adi kyerɛ me na ka me ho asɛm kyerɛ Farao na wommeyi me mfi ha. 15 Asɛm no ne sɛ, wɔkyeree me de me fii Hebrifo asaase so baa ha,+ na ɛha nso menyɛɛ hwee a ɛsɛ sɛ wɔde me bɛto afiase.”*+ 16 Afei bere a paanootofo panyin no hui sɛ nkyerɛase no akɔ yiye no, ɔno nso ka kyerɛɛ Yosef sɛ: “Me nso me dae mu no, na mesõ nkɛntɛn a esisi so abiɛsa, na na paanoo fitaa wɔ emu biara mu. 17 Ná nnuan ahorow a wɔtõ ma Farao no nyinaa bi wɔ kɛntɛn a ɛwɔ soro no mu; esi me ti so nyinaa na nnomaa redi nnuan a ɛwom no.” 18 Ɛnna Yosef kae sɛ, “Ne nkyerɛase ni: Nkɛntɛn abiɛsa no yɛ nnansa. 19 Aka nnansa na Farao atwa wo ti afi so, na ɔbɛsɛn wo dua so, na nnomaa bedi wo nam.”+ 20 Bere a nnansa no dui a Farao redi n’awoda+ no, ɔtow pon maa ne nkoa nyinaa, na oyii nsahyɛfo panyin ne paanootofo panyin no fii adi maa ne nkoa hui. 21 Ɔsan de nsahyɛfo panyin no dibea maa no, na ɔtoaa so hyɛɛ Farao nsã. 22 Na paanootofo panyin no de, ɔsɛn no, sɛnea Yosef kyerɛɛ dae no ase no.+ 23 Nanso nsahyɛfo panyin no ankae Yosef; ne werɛ fii no koraa.+
^ Nt., “wodii nna kakra.”